कब्जियतले दुःख दियो ? यसरी घरेलु विधिमा नै गर्न सकिन्छ पेटको सफाई - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
कब्जियतले दुःख दियो ? यसरी घरेलु विधिमा नै गर्न सकिन्छ पेटको सफाई
कोरोनाको त्रासले आफु भयभित बैचेनी र तनाबमा रहेको समेत बताउदै मनोपरामर्शका लागि मनोबिदलाई फोन गरे। साथै आफुलाई पहिला देखिनै डर चिन्ताको मानसिक समस्या भएको जानकारी समेत गराए ।
. लकडाउन, काेरोना त्रास र यौन जीवन
कब्जियत तथा पेटसँग सम्बन्धित अन्य समस्याहरु तनाव र चिन्ताको कारणले समेत हुने गर्दछ।
कोरोनाको प्रकोप तथा लकडाउनले स्बभाबिक रुपले मानिसहरुमा मानसिक तनाव, डर, त्रास, चिन्ता बढाएको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: आइतबार, पुस २५ २०७८ २०:३८:५०
Tags :गाेपाल ढकालगोपाल ढकाल
४० प्रतिशतले खोप लगाए, सरकारसँग अहिले चार करोड खोप छ : स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा